ဂရငျးဖိုငျနယျ ၅ ခုမှာ ရှုံးပှဲလုံးဝမရှိပဲ ပွိုငျပှဲမြားကို ဆကျတိုကျအနိုငျရလာခဲ့တဲ့ Team Secret နဲ့ Fnatic – Gaming Noodle
မကွာသေးမီက ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွတဲ့ BLAST Bounty Hunt ရဲ့ ဂရငျးဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာတော့ Team Secret အသငျးဟာ OG အသငျးကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရပွီး ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယငျးမတိုငျမီက OG ဟာ Nigma အသငျးကို ၂ ပှဲပွတျအနိုငျရရှိခဲ့သေးမယျ့ ပွိုငျပှဲရဲ့အစောပိုငျးအခွအေနမှောတညျးက စိုးမိုးနခေဲ့တဲ့ Team Secret ကိုတော့ ကြျောလှားသှားနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိပဲ အဆုံးသတျသှားခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဂရငျးဖိုငျနယျရဲ့ ပထမဆုံးပှဲမှာတညျးက Team Secret ရဲ့ ဘကျစုံအားကောငျးမှုကို ပရိသတျမြား တှမွေ့ငျခဲ့ကွရပါတယျ။ ယငျးပှဲမှာ Puppey ရဲ့ position5Nature’s Prophet ဟာ kda 8/1/20 အထိ ရရှိခဲ့ရုံသာမက OG ဘကျက SumaiL ရဲ့ networth ကိုပါ ကြျောလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ OG ရဲ့ MidOne ဟာ ပွိုငျပှဲမြားမှာ တှရေ့ခဲလှတဲ့ Spirit Breaker ကို ကိုငျတှယျကစားသှားခဲ့ပမေယျ့ စှမျးဆောငျရညျကောငျးမြားတော့ ထှကျမလာခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယပှဲမှာလညျး Team Secret ကပဲ 26-7 kill score နဲ့ ၂၂ မိနဈအတှငျး အနိုငျရရှိခဲ့ပွနျပါတယျ။ ယငျးပှဲမှာ ထူးခွားတာကတော့ Team Secret ဘကျက Nisha ရဲ့ kda 5/0/13 ရခဲ့တဲ့ Visage ဖွဈပွီး Matumbaman ကိုငျတှယျကစားသှားခဲ့တဲ့ Luna ဟာလညျး kda 8/2/11 အထိ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးပှဲမှာ OG ဟာ ယခငျပှဲမြားလောကျ အခွအေနမေဆိုးခဲ့ပမေယျ့ အနိုငျရခဲ့ခွငျးတော့ မရှိပါဘူး။ ယငျးပှဲအတှငျး Nisha ရဲ့ Storm Spirit ဟာ 12/4/20 အထိ ရရှိခဲ့သလို Matumbaman ရဲ့ Ursa အပါအဝငျ Team Secret အသငျးသားမြား အားလုံးနီးပါးဟာ Nisha လောကျနီးနီး kda မြား မွငျ့မားနခေဲ့ကွပါတယျ။
ယခုအခြိနျမှာတော့ Team Secret ဟာ ဂရငျးဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာ တဈဘကျအသငျးကို ရှုံးပှဲမရှိအနိုငျယူလာခဲ့တာ ပွိုငျပှဲ ၅ ခု ဆကျတိုကျရှိသှားခဲ့ပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ လကျရှိအခြိနျ Dota2လောကမှာ Team Secret ကို ယှဉျနိုငျတဲ့အသငျးမရှိသလို ဖွဈနပေါတယျ။
Team Secret ဆကျတိုကျအနိုငျရခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ ၅ ခုကတော့
WePlay! Pushka League Division 1 (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ VP.Prodigy ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
Gamers without Borders (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Natus Vincere ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
OGA Dota PIT 2020 Online: EU/CIS (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Team Liquid ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ
ESL One Birmingham 2020: EU/CIS: (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Alliance ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
BLAST Bounty Hunt (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ OG ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
ဒါပမေယျ့ လကျရှိမှာ TI ၂ နှဈဆကျ ခနျြပီယံဟောငျးအသငျး OG ဟာ အတှငျးပွဿနာမြားနဲ့ အခကျအခဲမြားကို ရငျဆိုငျနရေဆဲဖွဈနကွေောငျး N0tail က အငျတာဗြူးတဈခုအတှငျးမှာ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ MidOne နဲ့ Topson တို့ဟာ အငျတာနကျမကောငျးတဲ့အနအေထားမှာ ကစားနခေဲ့ရသလို ပွီးခဲ့တဲ့လမြားအတှငျးမှာ အသငျးလိုကျလကေ့ငျြ့မှုမြားလညျး နညျးပါးနခေဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Team Secret နဲ့အလားတူစှာ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ နိုငျပှဲဆကျလာနတေဲ့အသငျးကတော့ Fnatic ပါ။ လကျရှိအခြိနျ Fnatic ဟာလညျး ပွိုငျပှဲ ၅ ခုအထိ ဆကျတိုကျအနိုငျရရှိထားတာ​​ဖွဈပွီး ဂရငျးဖိုငျနယျ ပှဲစဥျမြားအားလုံးထဲမှာ ရှုံးပှဲငယျတဈပှဲ​တော့ ရှိခဲ့ပါတယျ။ Fnatic အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ပွိုငျပှဲမြားကတော့
DOTA Summit 12 (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ OG Seed ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
ESL One Los Angeles 2020 – Online: Southeast Asia (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Team Adroit ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
BTS Pro Series: Southeast Asia (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ TNC Predator ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
ESL One Birmingham 2020 – Online: Southeast Asia (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ BOOM ကို တဈပှဲသာရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အနိုငျရ)
Huya World E-sports Legendary League (ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Dota Hero ကို ၃ ပှဲပွတျအနိုငျရ)
Blast Bounty Hunt ရဲ့ ဂရငျးဖိုငျနယျမတိုငျမီကတော့ OG အသငျးရဲ့ offlane ကစားသမားဟောငျး Ceb ဟာ တှဈတာပျေါမှာ Team Secret ကို လှောငျပွောငျပွောဆိုမှုမြားပွုလုပျခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲအပွီးမှာတော့ Team Secret ဘကျက ပွနျလညျခပြေမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
ဂရင်းဖိုင်နယ် ၅ ခုမှာ ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိပဲ ပြိုင်ပွဲများကို ဆက်တိုက်အနိုင်ရလာခဲ့တဲ့ Team Secret နဲ့ Fnatic
မကြာသေးမီက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ BLAST Bounty Hunt ရဲ့ ဂရင်းဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာတော့ Team Secret အသင်းဟာ OG အသင်းကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမတိုင်မီက OG ဟာ Nigma အသင်းကို ၂ ပွဲပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သေးမယ့် ပြိုင်ပွဲရဲ့အစောပိုင်းအခြေအနေမှာတည်းက စိုးမိုးနေခဲ့တဲ့ Team Secret ကိုတော့ ကျော်လွှားသွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရင်းဖိုင်နယ်ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲမှာတည်းက Team Secret ရဲ့ ဘက်စုံအားကောင်းမှုကို ပရိသတ်များ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ယင်းပွဲမှာ Puppey ရဲ့ position5Nature’s Prophet ဟာ kda 8/1/20 အထိ ရရှိခဲ့ရုံသာမက OG ဘက်က SumaiL ရဲ့ networth ကိုပါ ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ OG ရဲ့ MidOne ဟာ ပြိုင်ပွဲများမှာ တွေ့ရခဲလှတဲ့ Spirit Breaker ကို ကိုင်တွယ်ကစားသွားခဲ့ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများတော့ ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယပွဲမှာလည်း Team Secret ကပဲ 26-7 kill score နဲ့ ၂၂ မိနစ်အတွင်း အနိုင်ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ယင်းပွဲမှာ ထူးခြားတာကတော့ Team Secret ဘက်က Nisha ရဲ့ kda 5/0/13 ရခဲ့တဲ့ Visage ဖြစ်ပြီး Matumbaman ကိုင်တွယ်ကစားသွားခဲ့တဲ့ Luna ဟာလည်း kda 8/2/11 အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပွဲမှာ OG ဟာ ယခင်ပွဲများလောက် အခြေအနေမဆိုးခဲ့ပေမယ့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ယင်းပွဲအတွင်း Nisha ရဲ့ Storm Spirit ဟာ 12/4/20 အထိ ရရှိခဲ့သလို Matumbaman ရဲ့ Ursa အပါအဝင် Team Secret အသင်းသားများ အားလုံးနီးပါးဟာ Nisha လောက်နီးနီး kda များ မြင့်မားနေခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာတော့ Team Secret ဟာ ဂရင်းဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ တစ်ဘက်အသင်းကို ရှုံးပွဲမရှိအနိုင်ယူလာခဲ့တာ ပြိုင်ပွဲ ၅ ခု ဆက်တိုက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအချိန် Dota2လောကမှာ Team Secret ကို ယှဉ်နိုင်တဲ့အသင်းမရှိသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
Team Secret ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ ၅ ခုကတော့
WePlay! Pushka League Division 1 (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ VP.Prodigy ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
Gamers without Borders (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Natus Vincere ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
OGA Dota PIT 2020 Online: EU/CIS (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Team Liquid ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
ESL One Birmingham 2020: EU/CIS: (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Alliance ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
BLAST Bounty Hunt (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ OG ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံဟောင်းအသင်း OG ဟာ အတွင်းပြဿနာများနဲ့ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်နေကြောင်း N0tail က အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ MidOne နဲ့ Topson တို့ဟာ အင်တာနက်မကောင်းတဲ့အနေအထားမှာ ကစားနေခဲ့ရသလို ပြီးခဲ့တဲ့လများအတွင်းမှာ အသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုများလည်း နည်းပါးနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Team Secret နဲ့အလားတူစွာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ နိုင်ပွဲဆက်လာနေတဲ့အသင်းကတော့ Fnatic ပါ။ လက်ရှိအချိန် Fnatic ဟာလည်း ပြိုင်ပွဲ ၅ ခုအထိ ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိထားတာ​​ဖြစ်ပြီး ဂရင်းဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များအားလုံးထဲမှာ ရှုံးပွဲငယ်တစ်ပွဲ​တော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ Fnatic အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲများကတော့
DOTA Summit 12 (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ OG Seed ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
ESL One Los Angeles 2020 – Online: Southeast Asia (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Team Adroit ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
BTS Pro Series: Southeast Asia (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ TNC Predator ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
ESL One Birmingham 2020 – Online: Southeast Asia (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ BOOM ကို တစ်ပွဲသာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရ)
Huya World E-sports Legendary League (ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Dota Hero ကို ၃ ပွဲပြတ်အနိုင်ရ)
Blast Bounty Hunt ရဲ့ ဂရင်းဖိုင်နယ်မတိုင်မီကတော့ OG အသင်းရဲ့ offlane ကစားသမားဟောင်း Ceb ဟာ တွစ်တာပေါ်မှာ Team Secret ကို လှောင်ပြောင်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ Team Secret ဘက်က ပြန်လည်ချေပမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။